Juventus oo qorsheeneysa in Manchester United ay kasoo ceshato Paul Pogba – Gool FM
Juventus oo qorsheeneysa in Manchester United ay kasoo ceshato Paul Pogba
Dajiye May 22, 2018
(Juventus) 22 Maajo 2018. Kooxda reer Talyaani ee Juventus ayaa ku fikireysa in ay qaado talaabo ay isugu dayayso dib u soo celinta xidigeedii hore khadka dhexe ee Paul Pogba, si ay kaga soo ceshato Manchester United suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
25 jirkan ayaa ku yimid kooxda Manchester United sanadii 2016 aduun lacageed gaarsiisan £ 89m, laakiin xiriirka uu la leeyahay Jose Mourinho ayaa ah midaan wanaagsaneen.
Paul Pogba ayaa ciyaaray 178 kulan oo rasmi ah afartii xili ciyaareed uu kusoo sugnaa kooxda Juventus, wuxuu kula guuleystay afar horyaal ee Serie A-da ah, iyo labo jeer ee Coppa Italia ah.
Laakiin xiddiga heerka caalami ee dalka Faransiiska ayaa hoos u dhac uu ku yimid kadib markii uu ku dhameystay xilli ciyaareedkan 2017-2018 inuu dhaliyay 4 gool iyo 12 kubad caawineed 37 kulan uu United-ka kaga soo muuqday dhamaan tartamada oo dhan.
Pogba ayaa iska diiday inuu sii joogo Manchester United kadib markii wax laga weydiiyay isbuucan mustaqbalkiisa, halka sidoo kale wargeyska “TotoSport” uu sheegay In Juventus ay xiiseeneyso in ay dib ugu soo celiso magaalada Torino.
Luis Suarez oo fariin taan cajiibka ah ku sagootiyay Andres Iniesta
Heshiiska Unai Emery uu u saxiixayo Arsenal oo la helay (Imisa ayuu mushaar u helayaa sanadkii?)